ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာငြင်းဆိုချက်၊ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ - မြင့်မြတ်သောအိပ်မက်
Privacy မူဝါဒကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ မေလ ၂၅ ရက် ၂၀၁၈ ။
WordPress.com မှအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပသည့် High Jewelery Dream သည်သုံးစွဲသူများမှကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - အောက်ပါအချက်အလက်များကို (or's ည့်သည်ဘရောက်ဇာမှရရှိအောင်ပြုလုပ်သည်) ကို Automattic's Demand Partners သို့စုဆောင်းပြီးပေးပို့သည် - အိုင်ပီလိပ်စာ၊ ပထဝီဒေတာ (IP လိပ်စာမှဆင်းသက်လာ)၊ သုံးစွဲသူကိုယ်စားလှယ်၊ လည်ပတ်မှုစနစ်၊ စက်အမျိုးအစား၊ ထူးခြားသောသုံးစွဲသူ ID (ကျပန်း) ထုတ်လုပ်ထားသောအမှတ်အသား၊ လက်ရှိ URL နှင့် IAB (Interactive Advertising Bureau) အကျိုးစီးပွားအမျိုးအစား။ မှတ်တမ်းဒေတာ (IP လိပ်စာ၊ ပထဝီဝင်အချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်၊ လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ကိရိယာအမျိုးအစား) ကိုရက် ၃၀ အတွင်းသိမ်းဆည်းထားသည်။ ထူးခြားသော user ID ကို cookies များတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီး ၁ နှစ်ကြာသည်။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာကောက်ခြင်း - ကြော်ငြာဆွဲဆောင်မှုများ၊ ဗီဒီယိုနှင့်ပတ်သက်သောအဖြစ်အပျက်များ (ဥပမာ - ခေတ္တရပ်တန့်ခြင်း၊ အသံတိတ်၊ ၁၀၀% ပြဇာတ်စသည်) သို့မဟုတ်အမှားများနှင့်ကြော်ငြာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အမျိုးမျိုးသော cookies များကိုအောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကို visitors ည့်သည်များထံပေးပို့ခြင်း၊ အသုံးပြုသူ၏မှတ်ပုံတင်များကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်အမည်ဝှက်ကြော်ငြာပလက်ဖောင်းမှတ်တမ်းများကိုစုဆောင်းခြင်း။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - မှတ်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ WordPress.com user ID / username (ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုရန်သင် logged in လုပ်ရမည်)၊ local site နှင့်သက်ဆိုင်သော user ID (အသုံးပြုသူလက်မှတ်ထိုးလျှင် အသုံးပြုသူကသတ်သတ်မှတ်မှတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကြိုက်ခဲ့သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားပြောသောစစ်မှန်သော / မှားယွင်းသောအချက်အလက်အချက်အလက်များ)) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဆိုက်သို့။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှဤသို့သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ပါကလုပ်ဆောင်မှုကိုခြေရာခံရန်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအသုံးပြုသည် - အိုင်ပီလိပ်စာ၊ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်၊ အဖြစ်အပျက်၏အချိန်ကာလအမှတ်အသား၊ ဘလော့ဂ်အိုင်ဒီ၊ ဘရောင်ဇာဘာသာစကား၊ နိုင်ငံကုဒ်နှင့်ကိရိယာအချက်အလက်။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံ: မှတ်ချက် likes ။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - အကယ်၍ Akismet ကို site ပေါ်တွင်ဖွင့်ထားပါကဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာတင်သွင်းသည့်အချက်အလက် - အိုင်ပီလိပ်စာ၊ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်၊ အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျတို့ကို - တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက် Akismet ၀ န်ဆောင်မှု (Automattic မှပိုင်ဆိုင်သည်) ကိုတင်ပို့သည်။ spam စစ်ဆေးခြင်း။ အမှန်တကယ်တင်သွင်းသောအချက်အလက်များသည်၎င်းတင်သွင်းသောဆိုက်၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးပုံစံပိုင်ရှင်ထံသို့တိုက်ရိုက်အီးမေးလ်ပို့သည် (ဆိုလိုသည်မှာအဆက်အသွယ်ပုံစံနေထိုင်သည့်စာမျက်နှာကိုထုတ်ဝေခဲ့သည့်ဆိုက်ရေးသားသူ) ။ ဤအီးမေးတွင်တင်သွင်းသူ၏ IP လိပ်စာ၊ timestamp၊ အမည်၊ အီးမေးလိပ်စာ၊
အချက်အလက်ထပ်တူပြုခြင်း (?) - သုံးစွဲသူ၏အဆက်အသွယ်ပုံစံတင်သွင်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့် metadata ပို့စ်နှင့် post တင်ရန်။ အကယ်၍ Akismet site ပေါ်တွင်ဖွင့်ထားပါက post meta တွင်သိမ်းထားသကဲ့သို့မှတ်ချက်နှင့်အတူမူလတင်သွင်းခဲ့သော IP လိပ်စာနှင့်အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်လည်းတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်မှုခံရလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသောအချက်အလက် - ကျေးဇူးပြု၍ သူစုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်အမျိုးအစားအတွက်သင့်လျော်သော Google Analytics စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ပါ။ WooCommerce (Automattic မှပိုင်ဆိုင်သည်) နှင့်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်း ၀ ယ်ယူသည့်ဖြစ်စဉ်အားလုံးတွင် ၀ ယ်ယူသည့်ဖြစ်ရပ်များအတွက် ၀ ယ်ယူခြင်းသည် Google Analytics သို့အောက်ပါအချက်အလက်များကိုပေးပို့လိမ့်မည်။ နံပါတ်၊ ထုတ်ကုန်အိုင်ဒီနှင့်အမည်၊ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား၊ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပစ္စည်းအရေအတွက် ဝယ်ယူ ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်မှဖွင့်နိုင်သည့် Google Analytics မှ IP အမည်ဝှက်ခြင်းကိုပေးထားသည်။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာကောက်ခြင်း - ဤအင်္ဂါရပ်သည် Google Analytics သို့စားသုံးရန်စာမျက်နှာကြည့်ရှုခြင်း (နှင့်ဗီဒီယိုဖွင့်ခြင်းဖြစ်ရပ်များ) သို့ပေးပို့သည်။ WooCommerce စွမ်းအားသုံးစတိုးဆိုင်များလည်ပတ်နေသည့်ဆိုဒ်များအတွက်အပိုဆောင်းအဖြစ်အပျက်များကိုဂူဂဲလ် Analytics သို့ပို့သည်။ စျေးဝယ်လှည်းများဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းများ၊ ထုတ်ကုန်များစာရင်းနှင့်ကလစ်များ၊ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အမြင်များနှင့်ဝယ်ယူမှုများသို့ပေးပို့သည် သတ်သတ်မှတ်မှတ် WooCommerce အဖြစ်အပျက်တစ်ခုစီတိုင်းကိုဆိုက်ပိုင်ရှင်မှဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
Gravatar Hovercards များ
အသုံးပြုသောဒေတာများ - ဤအင်္ဂါရပ်သည်အသုံးပြုသူ၏အီးမေးလိပ်စာ (ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်လျှင်သို့မဟုတ် WordPress.com သို့ဝင်ရောက်ပါက (သို့) သူတို့ကတက်ကြွသော Gravatar ပရိုဖိုင်းနှင့်တွဲဖက်သည့်သူတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာကို အသုံးပြု၍ ထို site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးလျှင်) ဤသည်သည် ၎င်းတို့၏ပရိုဖိုင်းပုံရိပ်ကိုပြန်လည်ရယူရန် Gravatar ဝန်ဆောင်မှု (Automattic မှပိုင်ဆိုင်သည်) ။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - WordPress.com Stats မှတဆင့် (စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ဤနေရာတွင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်) မှတစ်ဆင့်စာမျက်နှာဝန်ဆောင်မှုများကိုထပ်မံဝန်များဖြင့်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည် - အိုင်ပီလိပ်စာ၊ WordPress.com အသုံးပြုသူ ID (logged in ဝင်လျှင်) WordPress.com အသုံးပြုသူအမည် (ဝင်ရောက်ပါက)၊ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်၊ လာရောက်ကြည့်ရှုသည့် URL၊ ရည်ညွှန်းသော URL၊ ဖြစ်ရပ်၏အမှတ်အသား၊ ဘရောင်ဇာဘာသာစကား၊ နိုင်ငံကုဒ်။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာကောက်ခြင်း - စာမျက်နှာမြင်ကွင်းများကိုထပ်ဆောင်းဝန်တင်မှုတစ်ခုဖြင့်ခြေရာခံလိမ့်မည် (ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စာမျက်နှာအောက်ခြေသို့ scroll လုပ်ပြီးပို့စ်အသစ်တစ်ခုကိုအလိုအလျောက်တင်သောအခါ) ။ အကယ်၍ ဆိုက်ပိုင်ရှင်ကဤအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ Google Analytics ကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့လျှင်စာမျက်နှာဝန်ဆောင်မှုများကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်အပိုတစ်ခုစီနှင့်သင့်လျော်သော Google Analytics အကောင့်သို့ပို့လိမ့်မည်။
Jetpack & Akismet မှတ်ချက်များ
အသုံးပြုသောဒေတာများ - မှတ်ချက်သူ၏အမည်၊ အီးမေးလိပ်စာနှင့်ဆိုဒ်လိပ်စာ (မှတ်ချက်ပုံစံမှတဆင့်ထောက်ပံ့ပါက)၊ timestamp နှင့် IP လိပ်စာ။ ထို့အပြင် jetpack.wordpress.com IFrame မှအောက်ပါအချက်အလက်များကိုရရှိသည်။ WordPress.com ဘလော့ဂ် ID သည်ဆိုက်တွင်ပူးတွဲပါ၊ မှတ်ချက်တင်နေသည့် post ၏မှတ်ပုံတင်၊ မှတ်ချက်ပေးသူ၏ဒေသခံအသုံးပြုသူ ID (ရှိလျှင်)၊ မှတ်ချက်ပေးသူ၏ဒေသခံသုံးစွဲသူ (ရှိလျှင်) ရရှိနိုင်), မှတ်ချက်ပေးသူ၏ site ကို URL ကို (ရှိလျှင်), မှတ်ချက်ပေးသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာ MD5 hash (ရှိလျှင်) နှင့်မှတ်ချက်အကြောင်းအရာ။ အကယ်၍ Akismet (Automattic မှလည်းပိုင်ဆိုင်သည်) ဆိုဒ်ကိုဖွင့်ထားပါက၊ spam စစ်ဆေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်အောက်ပါအချက်အလက်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ မှတ်ချက်သူ၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဆိုက် URL၊ IP လိပ်စာနှင့်သုံးစွဲသူကိုယ်စားလှယ်။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံခြင်း - မှတ်ချက်ရေးသားသူ၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဆိုက် (လိပ်စာတင်သွင်းစဉ်အတွင်းပေးခဲ့လျှင်) cookies များကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒီ cookies အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အချက်အလက်ထပ်တူပြုခြင်း - မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောဒေတာနှင့် metadata အားလုံး (အပေါ်တွင်ကြည့်ပါ) ။ ၎င်းတွင်မှတ်ချက်၏ status ပါ ၀ င်ပြီး Akismet ကထို site ပေါ်တွင် enable လုပ်ထားလျှင်၎င်းကို Akismet မှ spam အဖြစ်သတ်မှတ်သည်ဖြစ်စေမပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Akismet anti-spam service ကိုအသုံးပြုသောဆိုက်များအားမှတ်ချက်ပေးသည့် visitors ည့်သည်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်သည်အသုံးပြုသူများသည်ဆိုက်အတွက် Akismet ကိုမည်သို့တည်ဆောက်ပုံပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်မှတ်ချက်ပေးသူ၏ IP လိပ်စာ၊ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်၊ ရည်ညွှန်းသူနှင့်ဆိုက် URL (မှတ်ချက်ပေးသူမှသူတို့ပေးသောအမည်၊ အသုံးပြုသူအမည်၊ အီးမေး) လိပ်စာနှင့်မှတ်ချက်သူ့ဟာသူ) ။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - လုပ်ဆောင်ချက်ကဲ့သို့စာမူတစ်ခုအားလုပ်ဆောင်ရန်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ WordPress.com အသုံးပြုသူ ID၊ WordPress.com အသုံးပြုသူအမည်၊ WordPress.com နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက် ID (ပို့စ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သည့်နေရာ)၊ post ID အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်၊ ဖြစ်ရပ်၏အချိန်ကာလ၊ browser ဘာသာစကား၊ နိုင်ငံကုဒ် (နှစ်သက်သောစာမူ၏) ။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာကောက်: post likes ။
ဒေတာအသုံးပြုသော - ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းအားကြည့်ရှုရန် or's ည့်သည်၏အကြိုက်။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံခြင်း - ဆိုက်၏ or ည့်သည်သည်၎င်း၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းအားကြည့်လိုသည်ဖြစ်စေမမှတ်မိစေရန် cookie (akm_mobile) ကို ၃.၅ ရက်ကြာသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒီ cookie အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - IP လိပ်စာ၊ WordPress.com အသုံးပြုသူ ID၊ WordPress.com အသုံးပြုသူအမည်၊ WordPress.com နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက် ID နှင့် URL၊ Jetpack ဗားရှင်း၊ သုံးစွဲသူကိုယ်စားလှယ်၊ လာရောက်ကြည့်ရှုသူ URL၊ ရည်ညွှန်း URL၊ ဖြစ်ရပ်၏အချိန်ကာလ၊ browser ဘာသာစကား၊ နိုင်ငံကုဒ်။ feature ည့်သည်နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုဤအင်္ဂါရပ်မှတစ်ဆင့်ဆိုက်ပိုင်ရှင်ထံသို့ပေးပို့နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ WordPress.com အသုံးပြုသူအမည်၊ ဆိုက် URL၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ မှတ်ချက်ပေးအကြောင်းအရာ၊ လိုက်နာရန်ဆောင်ရွက်ချက်များစသဖြင့်ပါဝင်နိုင်သည်။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာကောက်ခြင်း - အသိပေးချက်များပေးပို့ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ထံအကြောင်းကြားစာပေးပို့သောအခါ)၊ အသိပေးချက်များဖွင့်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုသူသည်သူတို့လက်ခံရရှိသည့်အကြောင်းကြားစာကိုဖွင့်သောအခါ)၊ အသိပေးချက်ဘောင်အတွင်းမှလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း (ဥပမာမှတ်ချက်တစ်ခုကြိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှတ်ခြင်း) spam ကဲ့သို့) နှင့် notification panel / interface အတွင်းရှိမည်သည့် link ကိုမဆိုနှိပ်ပါ။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - login လုပ်ဆောင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်လိမ်လည်မှုကိုတားဆီးရန်အတွက်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူ၏အိုင်ပီလိပ်စာကိုကြိုးစားခြင်း၊ အသုံးပြုသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာ / အသုံးပြုသူအမည် (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည် login လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအသုံးပြုရန်ကြိုးစားနေသည့်တန်ဖိုးနှင့်အညီ) နှင့် ကြိုးစားနေသောအသုံးပြုသူနှင့်တွဲနေသော IP နှင့်သက်ဆိုင်သော HTTP ခေါင်းစီးများ။
လှုပ်ရှားမှုခြေရာကောက်ခြင်း - မအောင်မြင်သောဝင်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှု (ဤတွင် IP လိပ်စာနှင့်အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်သည်) ။ အသုံးပြုသူမှသင်္ချာဆိုင်ရာ captcha တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာပြီးအောင်လုပ်ပြီးလျှင်၎င်းသည်အမှန်တကယ်လူသားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန် cookie (jpp_math_pass) ကို ၁ ရက်ခန့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီ cookie အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Data Synced (?) - အသုံးပြုသူ၏ IP လိပ်စာ၊ အသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်သုံးစွဲသူကိုယ်စားလှယ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့်ပျက်ကွက်သည့် login ကြိုးစားမှု။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - WordPress.com ဆာဗာများပေါ်တွင်ရှာဖွေမှုတောင်းခံမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် visit ည့်သည်များရွေးချယ်သောရှာဖွေစစ်ထုတ်စက်များနှင့်ဒေတာအချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။
အသုံးပြုသောဒေတာများကိုအီးမေးလ်မှတဆင့်မျှဝေသည့်အခါ (ဤရွေးချယ်မှုသည် site ပေါ်တွင် Akismet တက်နေမှသာအသုံးပြုနိုင်သည်)၊ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ပါတီ၏အမည်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုမျှဝေခြင်း (အသုံးပြုသူဝင်ရောက်ပါကဤအချက်အလက်များမှတိုက်ရိုက်ဆွဲထုတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့၏အကောင့်)၊ အိုင်ပီလိပ်စာ (spam စစ်ဆေးရန်)၊ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ် (spam စစ်ဆေးရန်) နှင့်အီးမေးလ်ခန္ဓာကိုယ် / အကြောင်းအရာ။ spam စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ဤအကြောင်းအရာကို Akismet (Automattic မှပိုင်ဆိုင်သော) သို့ပို့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် reCAPTCHA (ဂူဂဲလ်မှ) ကိုဆိုက်ပိုင်ရှင်မှဖွင့်ပါကမျှဝေပါတီ၏အိုင်ပီကိုထို ၀ န်ဆောင်မှုအားဝေမျှလိမ့်မည်။ ဂူဂဲလ်ရဲ့သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒကိုဒီမှာသင်ရှာနိုင်သည်။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - စာရင်းပေးသွင်းမှုများကိုစတင်ရန်နှင့်စတင်ရန်အတွက်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ပို့စ် (သို့) မှတ်ချက်၏မှတ်ပုံတင် (ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် မူတည်၍) ။ subscription အသစ်တစ်ခုစတင်နေပြီဆိုရင်၊ server ၏အချက်အလက်များစုဆောင်းပြီးအသုံးပြုသူရဲ့ HTTP တောင်းဆိုမှုခေါင်းစဉ်များ၊ စာရင်းသွင်းသူအသုံးပြုနေသည့်စာမျက်နှာကိုကြည့်နေသည့် IP address နှင့် URI တို့ကိုလည်းစုဆောင်းထားတယ်။ စာမျက်နှာ (REQUEST_URI နှင့် DOCUMENT_URI) ကိုကြည့်ပါ။ ဤဆာဗာဒေတာသည်အလွဲသုံးစားမှုနှင့် spam များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်အထူးအသုံးပြုသည်။
လုပ်ဆောင်မှုခြေရာကောက်ခြင်း - လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကွတ်ကီးများသည် visit ည့်သည်၏ဘလော့ဂ်ကိုမှတ်မိစေရန်နှင့် အကယ်၍ တကယ်တမ်းတွင်၎င်းတို့တွင်တက်ကြွသော subscription ရှိပါကအသုံးပြုရန်အတွက် cookies များကို ၃၄၇ ရက်ကြာသတ်မှတ်ထားသည်။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - WordPress.com Stats မှတဆင့်ဗီဒီယိုဖွင့်ရန်ခြေရာခံရန်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည် - ကြည့်ရှုသူ၏ IP လိပ်စာ၊ WordPress.com အသုံးပြုသူ ID (ဝင်ရောက်ပါက)၊ WordPress.com အသုံးပြုသူအမည် (ဝင်ရောက်ခဲ့လျှင်)၊ သုံးစွဲသူကိုယ်စားလှယ်၊ URL ကိုရည်ညွှန်းခြင်း, ဖြစ်ရပ်၏ timestamp, browser ကိုဘာသာစကား, တိုင်းပြည်ကုဒ်။ အကယ်၍ Google Analytics ကိုဖွင့်ထားပါက၊ ဗွီဒီယိုဖွင့်ခြင်းဖြစ်ရပ်များကိုလည်းထိုနေရာတွင်ပို့လိမ့်မည်။
အသုံးပြုသောဒေတာများ - IP လိပ်စာ၊ WordPress.com အသုံးပြုသူ ID (ဝင်ရောက်ပါက)၊ WordPress.com အသုံးပြုသူအမည် (ဝင်ရောက်ပါက)၊ သုံးစွဲသူကိုယ်စားလှယ်၊ လာရောက်ကြည့်ရှုသည့် URL၊ ရည်ညွှန်း URL၊ ဖြစ်ရပ်၏အချိန်ကာလ၊ browser ဘာသာစကား၊ နိုင်ငံကုဒ်။ အရေးကြီးချက် - ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်မှတဆင့်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်သည်တိကျသောပို့စ်တွင်ကြည့်ရှုမှု ၂၈၅ ခုရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်မည်သည့်သုံးစွဲသူများ / အကောင့်များကထိုစာမူကိုကြည့်ရှုနေသည်ကိုသူမမြင်နိုင်ပါ။ Stats မှတ်တမ်းများ - IP ည့်သည် IP လိပ်စာများနှင့် WordPress.com အသုံးပြုသူအမည်များ (ရှိလျှင်ရှိလျှင်) တို့ကို Automattic မှ ၂၈ ရက်ကြာသိမ်းဆည်းပြီးဤအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုသည်။
WordPress.com Toolbar ကို
ဤအင်္ဂါရပ်သည် WordPress.com သို့ ၀ င်ရောက်လာသောဆိုက်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသောအချက်အလက်များ - ၎င်းကို toolbar နှင့် logged-in အသုံးပြုသူ၏ WordPress.com အသုံးပြုသူ ID တွင်ပြသရန် logged-in အသုံးပြုသူ၏ Gravatar ပုံ URL ။ ထို့အပြင်လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံခြင်းအတွက် (အောက်တွင်အသေးစိတ်) IP လိပ်စာ၊ WordPress.com အသုံးပြုသူ ID၊ WordPress.com အသုံးပြုသူအမည်၊ WordPress.com နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက် ID နှင့် URL၊ Jetpack မူကွဲ၊ သုံးစွဲသူကိုယ်စားလှယ်၊ လာရောက်ကြည့်ရှုသည့် URL၊ ရည်ညွှန်းသော URL၊ ဖြစ်ရပ်, browser ကိုဘာသာစကား, တိုင်းပြည်ကုဒ်။
Activity Tracked: Toolbar ထဲကလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနှိပ်ပါ။
တရားဝင်ငြင်းဆိုချက် & အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများ
ဤဆိုဒ်တွင်ပါရှိသည့်အချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်အားလုံးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ရတနာရတနာအိပ်မက်မက် ဤဘလော့ဂ်တွင်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ၏တိကျမှု၊ ပြည့်စုံမှု၊ လက်ရှိ၊ သင့်လျော်မှုသို့မဟုတ်တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘလော့သည်ကိုယ်စားပြုမှုမရှိပါ။ ဤသတင်းအချက်အလက်၏အမှားအယွင်းများ၊ ပျက်ကွက်မှုများသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းများသို့မဟုတ်ယင်း၏ပြသမှုမှထွက်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ သို့မဟုတ်အသုံးပြုသည်။ အချက်အလက်အားလုံးကို as-is အခြေခံပေါ်မှာထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဤဘလော့ဂ်ကိုရေးသားသူသည်စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်မဟုတ်သကဲ့သို့ဇိမ်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်လည်းဝန်ထမ်းတစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ စာရေးသူသည်ရတနာဖန်တီးမှုအပေါ်အမြင်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖော်ပြမှုပုံစံတစ်ခုအဖြစ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပဏာမခြေလှမ်းအဖြစ်ရေးသားပြီးမျှဝေသည်။ သူမနှစ်သက်သောစကြဝuniverseာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်၏တောက်ပသောအကြောင်းအရာကိုသင်နှစ်သက်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သော်လည်း၊ သင်သည်သင်၏လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုဖတ်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။ မှတ်ချက်များကိုလက်ခံရန်ထက်ပိုပြီးမှတ်ချက်ပြုရန်နှင့် / သို့မဟုတ်မသင့်လျော်သောအပြုအမူများကိုသည်းခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ စာရေးသူကသူမအားတတိယပါတီ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်မတော်မလျော်ဖြစ်နေသည်ဆိုပါကဤဆိုဒ်မှဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
စာရေးသူသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအကြောင်းအရာများကိုအမြဲရှာဖွေနေသည်။ အဆိုပါအရေးအသားမူရင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ပါကအကြောင်းအရာရင်းမြစ်များကိုစာသားတစ်လျှောက်နှင့် / သို့မဟုတ်စာမူတိုင်း၏အောက်ခြေတွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပြီး embedded links များသည်ရင်းမြစ်စာမျက်နှာသို့တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားသည်။ ဤစာတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာအားလုံး၏တရားဝင်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်သည်စာရေးသူဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုသို့မဟုတ်အားလုံးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏စာဖြင့်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်ကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်၏ post / feature / article တွင်အကြောင်းအရာများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
စာရေးသူသည်ကျွမ်းကျင်သည့်စာနယ်ဇင်းသမားတစ် ဦး မဟုတ်သကဲ့သို့ဇိမ်ခံကုမ္ပဏီမည်သည့် ၀ န်ထမ်းမှမဟုတ်ပါ။ သူသည်ရတနာဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအမြင်များကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖော်ပြချက်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြိုးပမ်းမှုအနေဖြင့်ရေးသားခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူသည်မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊
High Jewelery Dream သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုအခြားကုမ္ပဏီသို့ရောင်းချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ High Jewelery Dream သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုမည်သည့် spam များစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီနေရာမှာဒါမှမဟုတ်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ကြော်ငြာအချို့ရှိရင် High Jewelery Dream ကကြော်ငြာသူများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအလေ့အကျင့်အတွက်တာ ၀ န်မရှိကြောင်းသတိပြုပါ။
ဘဝရှိအရာအားလုံးသည်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည်နှင့်အမျှစာရေးသူသည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏အာရုံကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ပိတ်ပစ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းဖြင့်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းသို့မဟုတ်မပါဘဲပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သိပါ။
High Jewelery Dream တွင်ကြော်ငြာတင်သောနေ့ရောက်လာလျှင်၎င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် / ထုတ်ကုန်များကိုသင့်ထံသို့ပေးပို့ရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ High Jewelery Dream သည်၎င်းမှပိုက်ဆံအနည်းငယ်ရရှိပါကဤ site ရှိကြော်ငြာသူများသို့မဟုတ်စပွန်ဆာများ၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါဟု ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ဘ်ဆိုဒ်မှလင့်ခ်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ၀ ယ်ယူသုံးစွဲပါက High Jewelery Dream နှင့်မဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သောပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
သင့်ထံမှကြားနာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်ပြီးသင်ပြောသင့်သမျှကိုစိတ်ဝင်စားပါသည်။ အီးမေးလ်၊ တွစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ ဂူဂယ်လ် +၊ Instagram တို့စသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားလိမ့်မည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သိပါ။ , ငါတို့ကအနာဂတ်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြချက်တစ်ခုအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အကြောင်းအရာသည်အောက်ပါနှင့် / သို့မဟုတ်လေးစားမှုမဖြစ်လျှင်, ဒီလျစ်လျူရှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။